အသကျ(၅၀) ပွညျ့မှေးနအေ့မှတျတရအနနေဲ့ Covid-19 ကာကှယျရေးအတှကျ လှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျခဲ့တဲ့ လှငျမိုး – Focus Myanmar
ပရိသတျကွီးရေ တဈခတျေတဈခါက ပရိသတျတှေ အသညျးစှဲကွိုကျခဲ့ကွတဲ့ မငျးသားခြော တဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျလှငျမိုး ကတော့ (၁၉၇၀) ခုနှဈ စကျတငျဘာလ (၁၇) ရကျနမှေ့ာမှေးဖှားခဲ့ပွီး ဒီနေ့ ကတော့ အသကျ (၅၀) ပွညျ့မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲဖွဈပါတယျ ။ ဒီနမှေ့ာ မှေးနေ့ အမှတျတရအဖွဈနဲ့ အလှူအတနျးတှပွေုလုပျခဲ့ပါတယျ ။
ဒီနေ့..၅၀..ပွညျ့ပါတယျ..ရှရေတုပေါ့ We love yangon နဲ့… နရောတခြို့…အလှုလုပျဖွဈခဲ့ပါတယျ.. ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ လှငျမိုးက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ မှေးနအေ့လှူ ပုံရိပျတှကေို ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ Covid-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးအတှကျ လိုအပျသညျ့နရောမြားတှငျ အသုံးပွုရနျ အတှကျ အလှူငှေ (၉) သိနျးကပျြတိတိကို လှူဒါနျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှကေတော့ လှငျမိုးအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတှေ အမြားကွီး တောငျးပေးထားကွတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ ။
လှငျမိုးကတော့ Covid..ကာလမှာ အားလုံးဘေးရနျကငျးပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့…..ပုံမှနျဘဝကိုအမွနျဆုံးပွနျရောကျပါစေ ဆိုသောဆု…တခုသာပေးပါ. လို့ ရေးသားဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ ။ ဦးလှငျမိုးရဲ့ အသကျ (၅၀) ပွညျ့မှေးနမှေ့သညျ နောငျနှဈပေါငျးမြားစှာထိ အခုလိုလှူနိုငျတနျးနိုငျပွီး ခဈြတဲ့မိသားစု ခဈြတဲ့ ပရိသတျနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျသှားနိုငျပါစလေို့ ဆယျလီကမ်ဘာက ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော ။
အသက်(၅၀) ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွင်မိုး
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေ အသည်းစွဲကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ မင်းသားချော တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်လွင်မိုး ကတော့ (၁၉၇၀) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ဒီနေ့ ကတော့ အသက် (၅၀) ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့မှာ မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ်နဲ့ အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနေ့..၅၀..ပြည့်ပါတယ်..ရွှေရတုပေါ့ We love yangon နဲ့… နေရာတချို့…အလှုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ လွင်မိုးက သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် မွေးနေ့အလှူ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ Covid-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် အလှူငွေ (၉) သိန်းကျပ်တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေကတော့ လွင်မိုးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတွေ အများကြီး တောင်းပေးထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် ။
လွင်မိုးကတော့ Covid..ကာလမှာ အားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့…..ပုံမှန်ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ပါစေ ဆိုသောဆု…တခုသာပေးပါ. လို့ ရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဦးလွင်မိုးရဲ့ အသက် (၅၀) ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ အခုလိုလှူနိုင်တန်းနိုင်ပြီး ချစ်တဲ့မိသားစု ချစ်တဲ့ ပရိသတ်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ ဆယ်လီကမ္ဘာက ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။